SIGNATURE BLUSHER 02 SUGAR ROSE | CosmeticMyanmar
Home » မိတ်ကပ် / Make Up » SIGNATURE BLUSHER 02 SUGAR ROSE
SIGNATURE BLUSHER 02 SUGAR ROSE
၁၃၅၈၀ ကျပ်/6G / 0.21 US FL. OZ.
Korea Brand ဖြစ်တဲ့ THE FACE SHOP မှထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Signature Blusher လေးကတော့ ပျိုပျိုမေတို့ကို နှင်းပွင့်လေးများလို နူးညံ့ သိမ်မွေ့သောအလှတရားမျိုးပိုင်ဆိုင်ရရှိစေ မှာပါ။ ဒီ Blusher လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Sugar Rose အမည်တွင်ပါသတဲ့ရှင့်။
Tags: BlushSIGNATURE BLUSHER 02 SUGAR ROSE